Maqaallada Chloe Smith ee Martech Zone |
Maqaallada by Chloe Smith
Chloe Smith waa la-taliye ganacsi iyo qoraa waqti-dhiman ah oo had iyo jeer diyaar u ah inuu la wadaago macluumaadka talo-bixinta. Waxay aaminsan tahay in hammi, geesinimo iyo, wixii ka sarreeya, aqoontu ay dhasho guul. Marka aysan shaqeynin, waxay u badan tahay inay meel uun ku duuban tahay buug wanaagsan, iyo koob shaah liin dhanaan ah (ama si ka sii daacadnimo badan u daawashada showga cusub ee 'Netflix hit show').
6 Siyaabood oo Calaamadaha Bulshadu ku Hagajiyaan Darajaynta
Isniin, Disembar 17, 2018 Arbacada, December 19, 2018 Chloe Smith
Calaamadaha bulshada ayaa metelaya isdhexgalka, sida retweets, like, iyo codadka, ee dadka isticmaala baraha bulshada sumaddaada, taas oo muujineysa caannimadeeda iyo tayadeeda makiinadaha wax lagu raadiyo. Google, Bing, Yahoo, iyo makiinadaha kale ee raadinta waxay adeegsadaan algorithms cayiman si ay u go'aamiyaan darajada natiijooyinka raadinta. Saamaynta dhabta ah ee calaamadaha bulshada ee natiijooyinka algorithms waa qiyaasta qof kasta, maaddaama algorithms-ka makiinadaha raadinta lagu ilaaliyo heshiisyada aan shaaca laga qaadin. Si kastaba ha noqotee, warbaahinta bulshada shaki la'aan waa